I-2.10 Imenyu yenkcazelo - i-Geofumadas
2.10 Imenyu yomongo
Imenyu yenkalo ibonakala kakhulu kwiyiphi na inkqubo. Ibonakala ibonisa into ethile kwaye icinezela iqhosha lasekunene lemouse kwaye libizwa ngokuba "lixhomekeke" ngenxa yokuba okukhethwa kukho oku kuxhomekeke kuxhomekeke kwinto eboniswe kwisikratshi, kwaye kwenkqubo okanye umyalelo owenziwayo. Qaphela kule vidiyo elandelayo umehluko phakathi kwamamenyu asemgangathweni xa ucofa kwindawo yomzobo kwaye xa ucinezela into ekhethiweyo.
Kwimeko ye-Autocad, oku kucacileyo kucacile, kuba ingadibaniswa kakuhle kunye nokusebenzisana kunye nefowuni yomgca wemiyalelo. Ekudaleni iibhanki, umzekelo, unokucofa iqhosha le mouse ukuze ufumane iinketho ezihambelana nesinyathelo ngasinye somyalelo.
Ngako oko, sinokuqinisekisa ukuba, emva kokuba umyalelo sele uqalisiwe, iqhosha le mouse elichanekileyo linokucatshulwa kwaye oko esiza kubona kwimenyu yomongo yikho konke okukhethwa kukho komyalelo ofanayo, kwakunye nokuhle ukukhansela okanye ukwamkela (kunye nenketho " Faka ") ukhetho olungagqibekanga.
Oku kuyindlela elula, enhle, indlela yokukhetha ngaphandle kokuba ucinezele ileta yenketho kwiwindow yomyalelo welayini.
Umfundi kufuneka ahlolisise amathuba okwenza imenyu yeemeko kwaye uyongeze eminye imisebenzi yabo kunye ne-Autocad. Mhlawumbi kuba yinto ekhethekileyo phambi kokuthayipha into kumgca womyalelo. Mhlawumbi, ngakolunye uhlangothi, akufanelekanga ukuba uyisebenzise konke, kuya kuxhomekeka kumsebenzi wakho xa udweba. Yintoni ephawulekayo apha kukuba imenyu yeemeko isinika iindlela ezikhoyo ngokutsho komsebenzi esenzayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo 2.9 Palettes
Post Next Iifayile zee-2.11Okulandelayo "